Semalt: Indlela Yokuvikela Isayithi Lakho Kusuka Esikhathini Sokubhala NgeSayithi
Iningi lezentengiselwano eziku-intanethi zizame ukuzamazama. Cishe wonke umuntu onayo iwebhusayithingoba okungaphezulu konyaka kunomzamo wokuhlaselwa noma uzothola. Le nhlekelele ibeka abantu abaningi kakhulu engozini. Ama-Blogger nabanikaziAmawebhusayithi we-e-commerce kufanele aqaphele lokhu kuhlaselwa kwama-fictions futhi alungise amanye amaphutha okubhala, okuholela kule mizamo yokuqapha.Iningi lezindaba zezokuphepha kwe-intanethi zibandakanya abaduni abazama ukuthola ukungena ngemvume okungagunyaziwe kumawebhusayithi futhi bathole ukufinyelela okuningiulwazi, iningi lazo libhekene nedatha yekhasimende njengolwazi lwekhadi lesikweletu. Abanye abaduni bangenza izenzo ezingekho emthethweninjengoba ukwehlisa iwebhusayithi noma ukwethula amasu okuncintisana okungalungile ku-platform ye-e-commerce.
Enye yezokuhlaselwa kwesicelo sewebhu esiphezulu yiS Cross-site Scripting (XSS)ukuhlasela. Lokhu kuphazamiseka kuhilela ukuhlaselwa komjovo ohlangothini lweklayenti, okuhloswe ekusebenzeni izikripthi kwiwebhusayithi noma kwesicelo sewebhu esisetshenziswayoukufaka umbhalo oqondile. Ikhodi yokukhokha enonya yenza imisebenzi ehlukahlukene emzimbeni wekhodi kanye nokwenza isiphequluli sesisulu sithumeleamakhodi endaweni engaziwa yecala kuphela eyaziwa yi-hacker.
I-Artem Abgarian, iMenenja Ephumelelayo Yempumelelo Yekhasimende Semalt ,unikeza izindlela zakho ezahlukene ngezindlela ezahlukene zokuthi le script ye-java isebenza kanjani nokuvikela iwebhusayithi yakho kulokhu kuhlasela:
Ukuhlasela kwe-cross-site Scripting (XSS)
Kwezinye izimo, ukuhlasela kwe-Cross-site Scripting (XSS) kungakhipha isiphequluli sonkeamakhukhi. I-XSS yinqubo eyinkimbinkimbi yobunjiniyela, futhi ingenza isiphequluli sibe isendlalelo esobala. Ngenxa yalokho, udinga ukucabangakwezinye izici zokuklama zewebhusayithi yakho ukuyivikela nge-XSS.
Kunoma iyiphi indawo ye-e-commerce, kubalulekile ukuvikela isayithi lakho ngokumelene ne-hacks enjalonjenge-Cross-site Scripting (XSS) yokuhlasela. Lokhu kusetshenziselwa ukuhlaselwa kwe-code-side injection injection, okungeyona nje eyenza iwebhusayithi ibe yingozi kodwafuthi umsebenzisi wokugcina. I-hacker ingakwazi ukuqhuba iskripthi kwiseva, engenza ukuba bathole ukufinyelela kolwazi oluyimfihlo. Ezinye izindlelaukuvimbela ukuhlaselwa kwesiSpring-site Scripting (XSS) kulesi siqondiso. Ungakwazi ukwenza iwebhusayithi yakho iphephile kusuka ku-XSSukuhlasela futhi futhi uvikele ukuphepha kwamakhasimende akho ngokumelene nabaqashi.